Awooda | December 2019
Caanaha naaska ee Tibetan (kefir fungus): Waxyaabaha kiimikada ah, isticmaalka iyo sifooyinka daaweynta
Mushta Kefir aad ayuu uga duwan yahay dadka caadiga ah ee kaynta. Waa maaddooyin cadcad leh oo cadcad (boogaha dusha sare ee caanaha la gooyay) oo u eg sida tufaaxa. Miyuu yahay kefir mushroom useful, iyo sidee loo isticmaali karaa? Taariiqda Taariikhda Xitaa wakhtiyadii hore, roogaga reer Tibet ayaa ogaaday in caanaha la gooyey dheriga dhoobada ah oo u eg suuqyo kala duwan.
Xilliga Cuntadu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee nolosha hooyooyinka: waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo si loo badbaadiyo in la sheego in qoyskaaga la siiyo ugu badan ee pickles jiilaalka, iyo roogyada qolalka kaydka ah waxaa lagu soo koobay awoodda leh nooc kasta oo wanaagsan. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa laba cuntooyin fudud oo loogu talagalay karinta digirta cagaaran ee cagaaran, taas oo kugu farxi doonta fududayntooda iyo xawliga fulinta, natiijooyinkuna maaha kuwo ka baxsan cid ka tagta.
Sida loo isticmaalo jiilaalka oo la kulmo gu'ga, ama 7 cunto sida ugu wanaagsan ee loogu talagalay canjeelada Shrove Talaadada
Dunida casriga ah, Maslenitsa waxaa loo dabaaldegaa sida badanaa sida wakhtiyadii ayeeyooyinka, laakiin isla markaa su'aasha ah ee kariska caruusadda delicious weli ma lumay midabtakoorka. Taasina waa sababta aan u sharaxno si faahfaahsan 7 cuntooyinka caanka ah ee faa'iido u leh inta lagu jiro usbuuca oo dhan ee xafladaha, laakiin marka hore waxaan u jeednaa taariikhda.
Sawirta noocan oo kale ah waxay kaa dhigi kartaa inta badan liqidda candhuufta, haddii aad ku dartid sharaxaad hore oo ah caraf udgoon oo khaas ah oo abuura dhirta marinada, ka dibna waxaad dooneysaa inaad ka baxdo meesha oo aad u dhaqaajiso dukaanka hilibka cusub , si ay u marinate iyo si dhakhso ah u tuuraan on ember.